“Real Madrid waxay i siisay qeyb ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnaa nolosheyda” – Mbappe – Gool FM
“Real Madrid waxay i siisay qeyb ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnaa nolosheyda” – Mbappe
Dajiye December 20, 2018
(PSG) 20 Dis 2018. Xiddiga da’ada yar ee kooxda Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ayaa xaqiijiyay in Real Madrid ay maalin maalmaha ka mid ah u ogolaatay inay siiso qeyb ka mid ah waqtiyadiisii ugu fiicnaa, kadib markii uu booqasho ku bixiyay.
Kylian Mbappé ayaa tilmaamay in Real Madrid ay siisay waqti aad u fiican, kadib markii uu la sameeyay tababarka mudo dhan isbuuc, islaa markaana uu la kulmay Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane.
“Marka aan gaaray 14 jir, waxaan mudo isbuuc ah tababar la sameeyay kooxda Real Madrid, waxaan la kulmay Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane iyo qaar ka mid ah xiddigaha kooxda, waxay ii noqotay qeyb ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnaa abid nolosheyda”
“Zinedine Zidane waa ciyaaryahan ka fariistay ciyaarista kubada cagta ee aan doonayay inaan la kulmo, ciyaaryahan kasta ee faransiis ah wuxuu ku riyoonayaa inuu ka garab ciyaaro”.
Si kastaba Kylian Mbappé ayaa haatan jirsaday 20 sano, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan kubada cagta ee aduunka, kadib markii uu xulkiisa qaranka France kaga caawiyay xirfada iyo awooda uu u leeyahay kubada cagta inay ku guuleystaan koobka aduunka 2018 ee ka dhacay dalka Russia.
RASMI: Juventus oo ku dhawaaqday in heshiis cusub ee waqti dheer ay ka saxiixatay difaaceeda Alex Sandro
BAL EEG: Sida ay u muuqan doonto SHAXDA Man United kaddib Jose Mourinho....(BAS Dambe laguma hor jari doono Goolka)